ပင်လုံဆောင်းပါးများ | Basic Democracy Training - Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian
Back to Panglong, back to basics (1)
ယနေ့ အချိန်အခါမှာ တိုက်ပွဲဝင် အင်အားစုတို့သည် ပြည်သူများနှင့် အတူ ပင်လုံ သို့ ပြန်လည် ချီတက် ရန်စတင်ပြင်ဆင် နေကြသည့် သမိုင်း ကာလတခု ကို ကျနော်တို့ အားလုံးဖြတ်သန်းနေကြရသည့် အချိန်ဖြစ်ပေသည်။ ဤသို့ ပင်လုံ ဟု အမည် တွင်သည့် တူညီသော ပန်းတိုင် တခု ဆီ သို့ချီတက် ကြရာတွင် ပကတိ ရုပ် လက်တွေ့ အခြေအနေအားဖြင့် စစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုး မှ ချီတက်ရန်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း အားလုံးနား လည်ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ “တူညီ ၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော အနာဂတ်“ ဆီသို့ လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့ သည် မိမိတို့ အသီးသီး ရောက်ရှိနေကြသည့် နေရာ၊ ပထ၀ီ အနေအထား၊ မတူညီသော အခြေအနေ အမျိုးမျိုး ပေါ်မူတည် ပြီး ကွန်ယက် စစ်ကြောင်း အမျိုးမျိုး ကို ပုံဖေါ် ကြမည် ဖြစ်သည်။
March 16th, 2012 at 2:11 am
ပင်လုံသို့တကျော့ပြန် ခရီး (၂) – Back to Panglong, back to basics (2)
ပင်လုံ နိုင်ငံ က စစ်သူကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က ဦးဆောင်ပြီး တိုင်းရင်းသားခေါင်း တွေနဲ့ အတူတကွ ချုပ်ဆို လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ ကြတဲ့ သမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ် ဟာ ပေါ်ထွန်းလာတော့မယ့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း မှီတင်း နေထိုင် ကြ မယ့် ပြည်ထောင်စုသား တွေ အချင်းချင်း ကြား မှာ ရန်လိုမုန်းထားမှု တွေ ကင်းရှင်းရေး၊ သံသယစိတ် တွေ ထာဝရ ပြေပျောက် ပြီး၊ လူမျိုး တမျိုး နဲ့ တမျိုး အကြား စစ်မက် နဲ့လူမျိုး ရေး ပဋိပက္ခ တွေ မရှိတဲ့ ထာဝစဉ်ငြိမ်းချမ်း သာယာ တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးတခု ထူထောင် ရေး အစရှိတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်အလက်တွေ နဲ့ ပြည့်စုံ လုံလောက်တဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တွေပါရှိပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် ပင်လုံကိုအခြေခံပြီး တည်ဆောက်တော့မယ့် ပြည်ထောင်စု ကြီးထဲမှာ လူမျိုးတမျိုး နဲ့ တမျိုး ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပေါင်း သင်း နေထိုင်တဲ့၊ အပြန်အလှန်လေးစားမှု တွေ ရှင်သန်တဲ့ ညီညွတ်ရေး အုတ်မြစ် တွေ ငြိမ်းချမ်းရေး အုတ်မြစ် တွေ ကို ပင်လုံမှာ အခိုင်အမာ ချမှတ်ခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါ တယ်။
အဲဒီလို သေနတ်တချက်မဖေါက်၊ သွေးမြေ တစက်မကျပဲ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နည်းအားဖြင့် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံကြီးကို တည်ဆောက် နိုင် ခဲ့ ကြတဲ့ အတွက် ကျနော် တို့ ရဲ့ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသစ် ထူထောင်ရေး သမိုင်း အစမှာ တာအထွက်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သမိ်ုင်း အစမှာ အဲဒီလိုသာ တာအထွက် မကောင်းခဲ့ပဲ ကွဲကြပြဲကြ၊ သတ်ကြဖြတ်ကြ၊ သေကြ၊ ကြေကြ၊ ပျက်စီး ခဲ့ကြရင်တော့ အဲဒီသမိုင်း အစ ဖြစ်တဲ့ ပင်လုံဆီ ကို ဘယ်သူမှ ပြန်လည် တမ်းတ ကြမှာ လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လည်း တမ်းတသတိရကြ တော့ မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြား စေ့ရေး ဆိုတာလည် ဖြစ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပင်လုံ ဆီကိုပြန်သွားဖို့ အစကနေပြန်စဖို့ ပြောကြ၊ ဆိုကြ၊ ဆွေးနွေး နေကြမှာ လည်း မဟုတ် တော့ပါဘူး။ အချိန်တွေ အလဟဿ တော့ အကုန်ခံပြီး ပင်လုံအကြောင်းတွေ ပြန်ပြန်ပြီးဖေါ်ထုတ်တာတွေ၊ ရေးသားတာတွေ လည်း လုပ်နေ ကြမှာ လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ “ပြည်ထောင်စု သမိုင်း အစ ပင်လုံ က” မို့လို့ သာ အစကနေ ပြန်စ ကြဖို့ ပြောနေ ကြရ တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပင်လုံ ဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုရဲ့ အစ၊ အတိတ် သမိုင်း ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပြန်လှည့် ကြည့်ရင် ဗမာအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူတွေအတွက် လှပတဲ့ အနာဂတ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြီးကို မြင်နေ ရလို့ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လုံမှာ အဲဒီလို ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ လှပသာယာတဲ့ အနာဂတ် ကိုဆောင်ကျဉ်း ပေးမယ့် လမ်းတွေကို နိုင်ငံ့ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ခင်းပေးခဲ့သည့်တိုင်အောင် သူ့ကို အသေသတ် သူကသတ် ခဲ့ကြတယ်….. သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပင်လုံ ပြည်ထောင်စုကနေ ခွဲထွက် ပြီး သူ့ကိုပါသစ္စာဖေါက်သူကဖေါက်ခဲ့ကြတယ်။ သူခင်းပေးတဲ့ ပင်လုံလမ်းအတိုင်း အားလုံးအတူတကွလက်တွဲပြီး တည့်တည့် မတ်မတ် ပြန်လည် လျောက်လှမ်း ကြဖို့ ဆွေးနွေးလေတိုင်း ဒီကိစ္စတွေကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ တာဝန်အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲ မသိသလိုလို နားမလည်သလိုလို၊ ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်သလိုလို ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်တဲ့သူ ကလုပ် ခဲ့ကြလို့ ဒီနေ့ အထိ တိုင်းပြည် ဟာ အမှား သံသယာထဲကနေရုန်းမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပင်လုံလမ်းကနေ ဝေးသထက်ဝေး အောင် တသက်လုံး ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်သာ လုပ်နေခဲ့တဲ့ ဗမာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ စစ်ဖိနပ်အေက်မှာ ကျွန်ဇာတ်ခင်းပြီး စစ်ကျွန်ဘ၀ သက် တန်း ရှည်ခဲ့ ကြရပါတယ်။
April 22nd, 2012 at 11:36 pm
ဤဒေသတို့သည် အမှန်တကယ်တွင်မူ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှု မရှိသော non self-governing territories များ မဟုတ်မူပဲ၊ မိမိတို့ ဒေသ သမိုင်း ဖြစ်စဉ် အရ စော်ဘွားများ၊ ဒူးဝါးများ၊ တိုက်သူကြီးများ အုပ်ချုပ်ခဲ့ သည့် သမိုင်း အစဉ်အလာအားဖြင့် ကိုယ် ပိုင်အုပ်ချုပ်သည့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်များ ကျင့် သုံးခဲ့သည့် ဒေသများဖြစ်ပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် အခြား ဖြစ်နိုင်ခြေ ရွေးချယ်စရာ Option အမျိုးမျိုး ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားနှင့်ပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လည်း အကယ်၍ ဗြိတိသျှတို့ က ယင်း Frontier Areas များ ကို non-selfgoverning territories များအဖြစ်ဇွတ်သတ်မှတ်ကာ UN Trusteeship Council လက်အောက်တွင် မဖြစ်မနေ ထားရှိမည် ဆိုပါက လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံဖြစ်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံ မှအပ မည်သည့် နိုင်ငံ အစိုးရ ကမျှ ယင်း Frontier Areas များ ကို ယာယီ စောင့်ရှောက်ရန် trusteeship အခွင့်အရေး မရှိသင့် ကြောင်း [.... but if such is the view of His Majesty‘s government the delegation maintain that no government outside Burma should have any claim in the privilege of trusteeship over these areas] သူ၏ စာတမ်းတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ [မဟာသရေစည်သူ ဦးဖေခင်၏ ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ စာမျက်နှာ (၆ဂ)။]
[International Trusteeship System. In 1945, under Chapter XII of the Charter, the United Nations established the International Trusteeship System for the supervision of Trust Territories placed under it by individual agreements with the States administering them. Under Article 77 of the Charter, the Trusteeship System applied to Territories held under Mandates established by the League of Nations after the First World War; Territories detached from "enemy States" asaresult of the Second World War; Territories voluntarily placed under the System by States responsible for their administration. The basic objective of the System was to promote the political, economic and social advancement of the Territories and their development towards self-government and self-determination. It also encouraged respect for human rights and fundamental freedoms and recognition of the interdependence of peoples of the world.] (http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust.htm).
ပင်လုံ ပြည်ထောင်စုကြီး ကိုစတင် ထူထောင်ခြင်း
“မိုးဒဏ်၊လေဒဏ်၊ ငလျင်ဒဏ် နဲ့ လောကဓံတရား တို့ ဖိစီးလာတဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူပြိုလဲပျက်စီးသွားတဲ့ အဆောက်အဦ ဟာ တည်ဆောက်သူ ဗိသုကာ ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှု ကိုဖေါ် ပြနေသလို၊ နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) ကျော် ပြည်သူတွေ သွေးချွေးမျက်ရည်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ အော်ကြ၊ ငိုကြ၊ ပြေးကြ၊ လွှားကြ၊ ပြည်ပကမ္ဘာ အနှံ့ကို အသုတ်လိုက် အသုတ်လိုက် တိမ်းရှောင်ကြ နဲ့ လူမှုဒုက္ခ အဝဝ ကို ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်း ခဲ့ရပြီး သွေးချောင်း စီးသတ်ဖြတ်နေကြတဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ကြီး အ တောမသတ်နိုင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကြည့်ပြီး တည်ဆောက် သူ ဗိသုကာကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို အပြစ်ဖို့ကြရတော့မှာလား။ တချိန်က တတင်္ဂတည်ရှိခဲ့ပြီး၊ အခုပြိုလဲပျက်စီးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ပင်လုံပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ အခိုင်အမာရှိခဲ့ တဲ့ သမိုင်းက ဘာကို ဖေါ်ပြ နေ သလဲ။ တည်ဆောက်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု မရှိ၊ ကပျက်ကချော် အမျှော်အမြင် မရှိစံမမီ ညံ့ဖျင်းတဲ့ အဆောက်အအုံ ယန္တယား တွေကိုပဲအသုံးပြုခဲ့တာလား။ ပင်လုံပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ ရှည်ကြစွာ အဖုံးကွယ်ခံခဲ့ရတဲ့ လျှိ့ဝှက် သမိုင်း ကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်လည် မဖေါ်ထုတ်နိုင်တော့ဘူးလား။ ဒီနေ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ မြန်မာလူငယ် မျိုးဆက်သစ် တွေဟာ ပင်လုံသမိုင်းရဲ့ အဖြစ်မှန်တွေ ထဲမှာ နိုးထကြပြီး ဒီမေးခွန်းတွေ ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဖြေ တွေကို ဖေါ်ထုတ်ကြ ရတော့မယ်။ စိန်ခေါ်မှု တွေ နဲ့ ပြီးတဲ့ ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေကို မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ က မှန်မှန်ကန်ကန် မထုတ်နိုင်သေးသရွေ့တော့ ပျောက်သုဉ်း သွား ခဲ့ တဲ့ ပင်လုံ ပြည်ထောင်စုကြီး ကို ပြန်လည်ရှာ တွေ့ကြဦး မှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး၊ ပြည်သူတွေ ရဲ့ ရာစုနှစ်ထက်ဝက်ကျော် သွေး၊ချွေး၊မျက်ရည်တွေ နဲ့ ပေးဆပ် မှုတွေ ဟာ လည်း တမဟုတ်ချင်း အတော သတ်သွားဦးမှာမဟုတ်ဘူး။”
“A sudden collapse ofabuilding in the midst of wind, rain, earth quake or natural disaster could be attributed to the shoddy job of the architect. Likewise, are we to blame Bogyoke Aung San, the architect of the modern-day Union of Burma for its over sixty years of undending civil war that consumed the blood sweat and tears of the people, who have been running and crying in despair and facing untold human miseries, coupled with mass exodus to the exiles? What kind of historical facts could we dig from the once shortly existed and now defunct Panglong Pyidaungsu? Have the builders of the Panglong Pyidaungsu lack proper visions and expertise? Has it been built with inferior building blocks and shoddy workmanship? Could we not properly expose the long hidden history of the Panglong Pyidaungsu? The new generation Burmese today need to be awakened to the truth of the history of Panglong and seek comprehensive answers to these questions. Unless and until these challenging questions could be correctly answered by the new generations, could we ever rediscover the lost Panglong Pyidaungsu and, more than halfacentury of sacrifices of the people’s blood, sweat and tears will not abrutply end.”
ဗြိတိသျှတို့ က မြန်မာနိုင်ငံအား မဖြစ်မနေလွတ်လပ်ရေး ပေးရတော့မည့် ထိုစဉ်ကာလ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး ရေချိန် အရ တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာ လူမျိုး တမျိုး နှင့် တမျိုး ကိုလိုနီ ကျွန်ပြုသည့် စနစ် များ ကို ကမ္ဘာ့ ကုလ သမဂ္ဂ ၏ အကူ အညီ ဖြင့် အားနှင့်အင်နှင့် ဖျက်သိမ်းနေချိန် ဖြစ်သည့်အပြင် ဗိုလ်ချုပ် အောင် ဆန်း သည် လည်း ခေတ်နှင့် တပြေးညီ တွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်ပြီး၊ ဝေးလန်သော အနာဂတ်ကို မျှော်ရည် မှန်းဆ နိုင်သည့် အမျှော်အမြင် ကြီး မား သော ရှားပါးသည့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတဦးဖြစ် သည် နှင့် အညီ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင် အစရှိသည့် Frontier Areas များ အား ဗမာတို့၏ ကိုလိုနီ ကျေးကျွန်နိုင်ငံ များအဖြစ်သို့ သွတ်သွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်၏ ကတိကဝတ်တို့ကို မယုံကြည် စရာ အကြောင်းမရှိခဲ့ပေ။ ဤ သို့သော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေ နောက်ခံကားချပ် နှင့် Frontier Areas ခေါင်းဆောင်များ နှင့် ဗမာမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တို့ ၏ နိုင်ငံရေး အမျှော်အမြင် တို့သည် သဟဇာတဖြစ်ကာ ကြီးကျယ်သော၊ ခန်းနားသော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ကြီးတခု ကို တန်းတူရည်တူ အတူတကွ စတင်ထူထောင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး နိုင်ငံရေး ရေခံမြေခံတို့ ဖြင့် ပြီးသော သမိုင်း အချိန်ကာလ ကို ဖြတ်သန်းရင်ဆိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့သောအခြေအနေ အရပ်ရပ် နှင့် အညီ ပင်လုံ ပြည်ထောင်စုကြီး ကို စတင် ထူထောင် ရာ တွင် လည်း အခြေခံအုပ်မြစ်များကို စတင် တည်ဆောက်ရာတွင် ပါရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းတို့ မှာ ခိုင်မာ သော ငြိမ်းချမ်း သာယာ သော ခေတ်မှီသော ခန်းနားကြီးကျယ်သော ပြည်ထောင်စုကြီး တခု ထူထောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ အပြည့် အစုံ ပါဝင်ခဲ့ သည် ကို ပင်လုံစာချုပ် ၏ ကျစ်လစ်ခိုင်မာသော ကဗျည်း စာသား များ တွင် တွေ့ ရှိ နိုင်ပါသည်။
ပင်လုံစာချုပ်၏ နိဒါန်းတွင် ပူးပေါင်းရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ တန်းတူရေး စသည့် ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စု တို့၏ သဘော တရား များပါရှိသည့် အပြင် ပင်လုံစာချုပ်၏ အခြား အပိုဒ်များတွင်လည်း ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများ ကို ကမ္ဘာ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများတွင် ခံစားရရှိ သကဲ့သို့ ရရှိခံစား ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ဘဏ္ဍာ ရေး ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်များ ရရှိခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း အခိုင်အမာ ပါရှိခဲ့ပေသည်။ Frontier Areas မှခေါင်းဆောင်တို့ တောင်းဆိုသည့် Burma Proper နှင့်အတူ ပူးပေါင်းကာ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ ကိုထူ ထောင်ကြသည့်တိုင်အောင် “အချိန်မရွေး ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်” ဆိုသည် ကို မူ ဗိုလ်ချုပ်အနေနှင့် မနစ်မြို့သည့် တိုင်အောင် သမိုင်းကြောင်းအရ ဤဒေသတို့ က ဗမာ အပေါ် ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့နေခဲ့သည်ကို ဗိုလ်ချုပ် ကိုယ်တိုင် က နားလည်မှု ထားရှိ ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ယတိပြတ် မငြင်းပယ်ခဲ့ပေ။ ဤသည်မှလည်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ၏ နိုင်ငံရေး အမျှော်အမြင် ကြီးမားမှု တရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဤ ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့် ဟူသော အငြင်းပွားဘွယ် ကိစ္စ ကို တည်တည် ငြိမ်ငြိမ် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကိုင်တွယ် တုန့်ပြန် နိုင်မှုကြောင့်လည်း Frontier Areas မှခေါင်းဆောင်များ ၏ “အချိန်မရွေးခွဲထွင်ခွင့်” တောင်းဆိုမှု အား ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း က “ဆယ်နှစ်တန်၍ ကြေနပ်မှုမရှိမှခွဲထွက်ရန်” ဟူ၍ တန်ပြန် အဆိုပြု ကာ Frontier Areas မှခေါင်းဆောင်များ နှင့် အပေးအယူလုပ်ပြီး၊ အောင်မြင်စွာ ညှိနိုင်းခဲ့သည်ကိုပင် အချို့သော ဗမာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ က မနှစ်မြို့၊ လက်မခံနိုင်ခဲ့ကြပေ။ ထိုကာလ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ခေတ်ပြိုင် ဗမာ နိုင်ငံရေးသမား များ က ဤ အချက်ကို မကြေမနပ် ထောက်ပြ လာသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်က ဆယ်နှစ်နေလို့မှ ခွဲထွက်ချင်ကြလျင် ဗမာ တို့ ညံ့ရာကျမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘွင်းဘွင်းကြီး ပြောချလိုက်သည် ကို ဗမာနိုင်ငံရေးသမား များပြန်လည်မခြေပနိုင်ခဲ့ကြပေ။ ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့် ဟူသည် ထိုကာလ Frontier Areas မှ ခေါင်းဆောင်များ (အထူးသဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် ကယားပြည်နယ်) အတွက် ဗမာနှင့် ပူးပေါင်းကာ ပြည်ထောင်စု အတူတကွဖွဲ့ကြ မည်ဆိုလျင် အလွန်တရာ မှအခရာကျသော ကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အနေနှင့် ဤကိစ္စ ကို အကြောက် အကန်လည်း မငြင်းဆိုခဲ့၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဘုံသဘောတူညီမှုရနိုင်သည့် “ဆယ်နှစ်တန်၍ ကြေနပ်မှုမရှိမှခွဲထွက်ရန်” တန်ပြန် အဆိုပြု ခဲ့သည်။ ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့် နှင့်ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ၏ အမြင်မှာ ရှင်းလင်းလှသည်။ ပင်လုံသဘောတူညီမှု အတိုင်းပြည်ထောင်စု ကိုအမှန် တကယ် တည် ဆောက် လျင် Frontier Areas တို့ ကလည်း (၁ဝ) နှစ်မက အနှစ် (၁ဝဝ)၊ တထောင် တိုင်ခွဲထွက်လိုကြမည်မဟုတ်။ ပင်လုံသဘောတူညီမှုကို ဖေါက်ဖျက်ပါက ခွဲထွက် လို ကြမည်။ ဆယ်နှစ်တန်၍ မှ ခွဲထွက်လိုကြလျင် ခွဲထွက်လိုသူကိုအပြစ်မတင်သာ၊ “ဗမာညံ့ရာသာကျမည်” ဟူသည့် ဗိုလ်ချုပ်၏ စကားကို ဤသို့ နား လည် နိုင်ပါ သည်။ တနည်းအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်သည် ပင်လုံကို နှစ်နှစ်ကာကာယုံကြည်သည်။ သူကိုယ်တိုင် ဗမာပြည်သူတို့၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကိုဦးထိပ်ထားကာ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် ကတိကဝတ်တို့ ကို သူကိုယ်တိုင်က ဘယ်နံရောအခါ မှ သစ္စာဖေါက်မည့်လူစားမျိုးမဟုတ်။ အစဉ် လေးစား၊ စံထား လောက်သည့် ဗမာ မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း ၏ အလိုအရမူ Frontier Areas များ ကို (၅) နှစ်စီမံကိန်း များဖြင့် အဆင့် ဆင့် ပျိုးထောင်ပြီး ဗမာနှင့်အတူ တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်မည်၊ ဗမာ နှင့် တန်းတူရည်တူ တိုးတက်နေသမျှ၊ ပင်လုံစာချုပ်နှင့်အညီ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်များ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထား နေသမျှကာလ ပတ်လုံး ခွဲထွက်ရေး ကိုတောင်းဆိုလာစရာအကြောင်းမရှိ၊ သာယာ သောငြိမ်းချမ်းသော စည်းလုံးသော ပြည်ထောင်စု ကြီးကို အတူတကွ ထူထောင် ဖြစ်ကြမည်။ ဤသည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်၏ ပင်လုံ သစ္စာ၊ ပင်လုံ စိတ်ဓါတ်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ဟူသည်မှာ သမိုင်းကြောင်းအရ ဗမာကိုယုံကြည်ရန်ခက်ခဲ ၍ တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရေရှည်တွင် ပင်လုံ ကတိ ကဝတ် များ ကိုလက်တွေ့ ကျကျ အကောင်အထည်ဖေါ်ကာ ယုံကြည်မှု ကိုအမှန်တကယ်တည်ဆောက်နိုင်ပါက ဤကိစ္စသည် ယာယီသဘော သာဆောင်သော ကိစ္စဖြစ်မည်။ ထာဝရ သဘောကိုမဆောင်။ ထို့ကြောင့်လည်း ယင်းခွဲ ထွက်ပိုင်ခွင့် ကို ထူထောင်လတ္တံ့သော ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသစ် ၏ အခြေခံအုတ်မြစ် အဖြစ် ထာဝရ နိုင်ငံရေး လမ်းညွှန် ဖြစ်လာမည့် ပင်လုံစာချုပ်ထဲတွင် ထည့်မရေးပဲ၊ ခေတ်နှင့် သမိုင်း တို့ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့် အမျှ ပြုရ ပြင်ရ လွယ်ကူ သည့် ပြည်ထောင်စု ၏ အခြေခံဥပဒေတွင်ထည့် ရေးရန် ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်က အဆိုပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်၏ တမျှော်တခေါ် အဝေးကိုကြိုတင် မြင်နိုင်စွမ်းသည့် နိုင်ငံရေး အမျှော်အမြင်ကြီးမားမှု ကိုသက်သေထူခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ အပြင် ပင်လုံသဘောတူညီချက်များကိုအခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုအခြေခံဥပဒေ ကိုရေးဆွဲ နိုင်ရေးအတွက် လမ်း ညွှန်ချက် (ရ) ချက်ကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲကာ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွတ်တော်၏ အတည်ပြု ချက်ကို ရယူခဲ့သေး သည်။ ယင်း ပြည်ထောင်စုအခြေခံဥပဒေ ကိုရေးဆွဲ နိုင်ရေးအတွက် လမ်း ညွှန်ချက် (ရ) ချက် တို့၏ အနှစ်သဘော တို့ မှာ….
၁) ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရမည်။ (လူမျိုတမျိုးတည်းနေထိုင်သော တမင်းတနိုင်ငံ တပြည်ထောင်စနစ်မျိုး ကိုထူထောင်ရန်မဟုတ်၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ နေထိုင်သော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ အခြေခံ ဥပဒေ ကိုရေးဆွဲရမည် ဟူလို။)
၂။ ပြည်နယ်များ သည် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့် (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ) ရှိစေရမည်။ (ပြည်နယ်များ သည် ဗမာပြည်၏ တပည့် နိုင်ငံ vassel states ကဲ့သို့၊ ကိုလိုနီများကဲ့သို့ မဖြစ်စေရ ဟူလို)။
၃။ ပြည်နယ်များ အပါအဝင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့၏ အာဏာ သည် တိုင်းသူ ပြည် သားများထံမှဆင်းသက်ရမည်။ (ပြည်နယ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် များကို များကို သမ္မတ သို့မဟုတ် တစုံတဦး က အပေါ်စီးမှ ခန့် အပ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ၊ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ပြည်သူတို့ က အောက်ခြေမှ ရွေးကောက် သော အစိုးရများဖြစ်ရမည် ဟူလို)။
၄) တိုင်းသူပြည်သားမှန်သမျှ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး တို့တွင်တရားမျှတမှုရှိ စေလျက် လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစိ အခွင့် အရေးများကို ဥပဒေ သက်ရောက်မှုတွင် ဆူကြုံ နိမ့်မြင့် မရှိ ပကတိ တန်းတူ ခံစားကြရမည်။ (ပြည်ထောင်စု အခြေံဥပဒေသည် ဒီမိုကရေစီ ကို အခြေခံသော အခေခြံဥပဒေ ဖြစ်ရမည် ဟူလို။)
၅။ လူနည်းစုများ အတွက် လုံလောက်သော ကာကွယ် ချက်များ ပြဌာန်းထား ရမည်။ (ဒီမိုကရေစီ သဘောတရား အရ လူများစုမှအုပ်ချုပ်ရန်ဖြစ်သော်လည်း၊ ပြီးပြည့်စုံသော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ ထူထောင်ရန်အတွက် ဒ်ီမိုကရေစီသဘောတရား ၏ အခြားသော အနှစ်သာ ရတခုဖြစ်သည့် လူနည်းစု အခွင့် အရေး ကို အာ မ ခံထားသည့် အခြေခံဥပဒေ ကိုပြဌာန်းရမည်ဟူလို။)
၆ နှင့် ရ။ တိုင်းပြည် ကာကွယ်ရေး နှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် ပြဌာန်းချက်များ။
ဤသို့ဖြင့် ပင်လုံသဘောတူညီချက်များ နှင့် အညီ ဖြစ်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ၏ အခြေခံဥပဒေ ကိုရေးဆွဲရန် အခြေခံလမ်းညွှန်ချက် (ရ)ချက်ကို အသေအ ခြာ ရေးဆွဲ ပြဌာန်းပြီး ယင်းတို့အား အခြေခံလျက် ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေ (ပထမ မူကြမ်း) ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် ဥိးဆောင်ကာ ရေးဆွဲ ခဲ့သည်။ ပင်လုံ ပြည်ထောင်စုကြီးအား သေနပ်တချက်မဖေါက်၊ သွေးမြေ တစက်မကျ စေပဲ ငြိမ်းချမ်းသော သံတမန်နည်း အားဖြင့် အောင်မြင်စွာ ထူထောင် လိုက်ကြ သည်။ ဗမာမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်ပြီး၊ သူကိုယ်တိုင် ပင်လုံစာချုပ်ကို ဗမာ ပြည်သူတို့ကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ထူထောင်ခဲ့သော ပင်လုံ ပြည်ထောင်စုကြီးသည် ဗမာပြည်သူတို့ အတွက် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းသာယာသော ပြည်ထောင်စုကြီးကိုမျက်မောက်ပြုနိုင်ရေး အတွက် အာမခံချက် အပြည့်အဝရှိသည့် အပြင် ယင်းပင်လုံပြည်ထောင်စုကြီးတွင် ပါဝင်သည့် တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်များ အတွက်လည်း ဗမာညီအစ်ကို တို့နှင့် ချစ်ချစ် ခင်ခင် ထာဝရ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင် ကြမည့် ဒီမိုကရေစီ နှင် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု မူများ၊ သဘောတရားများ ဖြင့် အခိုင်အမာ ပနှက်ရိုက်ကာ အုပ်မြစ်ချထားသော ခေတ်သစ် ပင်လုံ ပြည်ထောင်စု ကြီး တခုဖြစ်ပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထူထောင်ခဲ့သော ပင်လုံ ပြည်ထောင်စုသည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပင်လုံ နိုင်ငံသားတို့် အနက် ဗမာ အပါအဝင် မည်သည့် လူမျိုး တမျိုးမျိုး ၏ ထာဝရ အကျိုးစီးပွား ကို မျှထိခိုက် နစ်နာ ပျက်စီးစေမည့် ပြည်ထောင်စုမျိုး အလျင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ပင်လုံပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက် ထူထောင်ခဲ့သည့် ဗိသုကာ ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ထိုခေတ်ထိုကာလ ပြည်သူများအပေါ်သာမက နှစ်ပေါင်း ရာစု နှစ် မကရှည်ကြာ သည့်တိုင်အောင် နောင်လာနောက်သား ဗမာပြည်သူများအပါအဝင်ဖြစ်သည့် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပင်လုံနိုင်ငံသားတို့ ငြိမ်းချမ်းသော သာယာသော ပြည်ထောင်စုကြီး ကိုမျက်မှောက်ပြု နိုင်ရေးအတွက် အာမခံချက် အပြည့်အဝရှိသည့် ပင်လုံနိုင်ငံသစ်ကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်မှာ ယုံမှားသံသယ ထားဘွယ် အလျင်းမရှိခဲ့ပေ။ အမှန်တကယ်တွင်မူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သည် ပင်လုံပြည်ထောင်စုကြီး ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အခိုင်အမာ ချမှတ်နိုင် ခဲ့ သည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ဗိသုကာကြီးတဦးပေတည်း။
ဤ သည်မှာ ပင်လုံ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံကြီးပေါ်ထွန်း ခဲ့သည့် အစစ်အမှန် သမိုင်း ၏ အနှစ်သဘော ဖြစ်သည်။
The Panglong Agreement – ပင်လုံစာချုပ် (၁၉၄၇) – ပင်လုံစာချုပ် (၁၉၄၇) ကို အပြည့် အစုံဖတ်ရန် / ဆွဲချရန် – See more at: http://vansangva.com/vansangva-library/#1
ပင်လုံပြည်ထောင်စု ကြီး ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်း နှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း
“အများတကာရဲ့လွတ်လပ်ရေးကို နှောက်ယှက် တာဟာ လွတ်လပ်ရေး မဟုတ်ဘူး“ – ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း –
“Disturbing others’ liberty is not liberty” – Bogyoke Aung San -
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တိုင်းပြည်အတွက် လွတ်လပ်ရေး ကိုအရယူပေးခဲ့သော်လည်း သူထူထောင်ခဲ့သော ပင်လုံပြည်ထောင်စုကြီးသည် သူနှင့်အတူ ဇတ်သိမ်းသွား ခဲ့ရသည်ကို အများပြည်သူ တို့သတိမမူမိခဲ့ကြပေ။ သာမန်ပြည်သူတို့သတိမမူမိကြသည်ကို ထားဦး ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေ (၁၉၄၇) ကိုပင် ပင်လုံစာချုပ်ကို အခြေခံထား သယောင် လူမျိုးစု တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးသမား အချို့က ထင်ယောင်မှား ခဲ့ဘူး သလို၊ ယင်းအခြေခံဥပဒေ (၁၉၄ရ) သည်ပင်လျင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြစ်ကြောင်း ဝန် ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု က ရှစ်လေးလုံးကာလ ချင်းတိုင်းရင်း သား တို့နှင့် တွေ့ဆုံပွဲ တခုတွင် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာပြောကြားခဲ့ ဘူးသည်။ ထို့အပြင် လက်ရှိ ပြုပြင် ပြောင်း လဲရေးကာလကို အမီလိုက်ကာ တက်သုတ်ရိုက်ဝင်လာကြသည့် နိုင်ငံခြားသားပညာ ရှင် သုတေသီ အ ချို့ကလည်း ကျွန်ပ် တို့ နိုင်ငံ တွင် ရှိခဲ့၊ ကျင့် သုံး ခဲ့ ဘူးသော၊ ကျင့်သုံး နေဆဲဖြစ် သော အခြေခံဥပဒေများအနက် ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ အခြေခံ ဥပဒေ(၁၉၄ရ) သည် ဖက်ဒရယ်စနစ် နှင့် အ နီး စပ်ဆုံး ဖြစ် ကြောင်း ရေးသားလာ ကြ ပြန် သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေ (ပထမမူကြမ်း) သည် သမိုင်း စာမျက်နှာ များ ပေါ်မှ ပျောက် ခြင်း မလှပျောက်နေခဲ့သည်။ ၄င်းနှင့်အတူ ပင်လုံသမိုင်း သည် လည်း လှို့ဝှက် သမိုင်း တခုသဖွယ်သမိုင်းစာမျက်နှာများပေါ်မှ ပျောက် နေခဲ့သည်။
အမှန်မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေ (၁၉၄ရ) သည် ဖက်ဒရယ် စနစ် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်ကို အထူးဆွေးနွေး ငြင်းခုန်စရာ ပင် လိုမည် မထင်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကျဆုံးပြီးနောက် သူရေးဆွဲခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေ(၁၉၄၇) (ပထမမူကြမ်း) တွင် ပင်လုံ ကို အခြေခံသည့် ဖက်ဒရယ် အနှစ်သာရ အငွေ့အသက်များကိုပယ်ဖျက်ကာ အသစ်တဖန် ပြန်လည်ရေးဆွဲခဲ့ သည့် ဦးချန်ထွန်း ကိုယ်တိုင် က ယင်း အခြေခံ ဥပဒေ သည် အပေါ်ယံအားဖြင့် ဖက်ဒရယ် ဖြစ်သော်လည်းအနှစ်သာရအားဖြင့် တပြည်ထောင် စနစ် ဖြစ် ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည့် အချက်သည် ပင်လျင် ယင်း အခြေခံ ဥပဒေ သည် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု စနစ် နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်ကြောင်း အရှင်း ဆုံး ဝန်ခံချက်ဖြစ်ပေသည်။ ဥပဒေကိုရေးဆွဲသူ ကိုယ် တိုင်က ယင်း အခြေခံဥပဒေ ကို တပြည်ထောင်စနစ် အဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ရေးဆွဲခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံ ထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် ယင်းအခြေခံဥပဒေ(၁၉၄ရ) သည် ဖက်ဒရယ် ဟုတ်မဟုတ် ပြည်ထောင်စု စနစ် ဟုတ် မဟုတ် အချိန်ကုန် ခံ ကာ ဆက်လက် ပြီး အကျယ်အကျယ် အ ငြင်းပွား နေစရာ မလိုတော့ပေ။ တနည်းအားဖြင့် ယင်းအခြေခံဥပဒေအားဖြင့် ပင်လုံလမ်း မှစတင် လမ်းခွဲ ခဲ့ ကြပြီး ဖြစ်သည်။ ပင်လုံပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲ ပျက်စီး ရေး လမ်းကြောင်း သို့ စတင်လမ်းလွဲခဲ့သည်မှာ ယင်း၁၉၄၇ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ ဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာ သက် သေ ထူနိုင်ပါ သည်။ ကျည်း မြောင်းသေးသိမ်သော အမျိုးသားရေးဝါဒီတို့က အပေါ်ယံ အားဖြင့် ဖက်ဒရယ် သကာရည် ကို လိမ်မာပါးနပ်စွာ လူးထား နိုင်ခဲ့သဖြင့် တိုင်းပြည်ကို တပြည်ထောင်စနစ်ဘောင်အတွင်းသို့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သွတ်သွင်းနိုင်သည်သာမက သာမန်ပြည်သူများကို မဆိုထားနှင့် ပညာရှင် အချို့ကိုပင် လှည့် စား နိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံကိုလည်းသေးသိမ်နိမ့်ကျသော သွေးအလိမ်းလိမ်းနှင့် စစ်ဘီလူးတို့ ကျက်စားရာ စစ်တလင်း တစပြင် အဖြစ်သို့ ကျဆင်း သက်ရောက် စေခဲ့ သည်။ http://vansangva.com/vansangva-library/#5
ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်း၏ အစပိုင်းကာလ – ရောင်စုံသူပုန်ခေတ်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေ(၁၉၄၇) ခေါ် တပြည်ထောင်စနစ် အသက်ရှင်သန်ခဲ့သည့် ၁၉၄ဂ မှ ၁၉၆၂ ခုနှစ်အကြား (၁၄) နှစ်တာ ကာလ၊ ပါလီမန်ခေတ် (သို့မဟုတ်) ဒီမိုကရေစီ ခေတ် ဟုအများ နားလည်ကြသော ထိုကာလ အတွင်းတွင် ပြည်တွင်း စစ်မီး သည် စတင် အရှိန် ရကာ တောက်လောင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေ(၁၉၄၇) သည် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ကို မဆောင်ကျည်းနိုင်ခဲ့ပေ။ တပြည်ထောင်စနစ် ကိုပြဌာန်း ထား သဖြင့် လူမျိုး ပေါင်းစုံ နေထိုင်သောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနှင့် အံမဝင် ဂွင်မကျ၊ ပင်လုံ မူ များ နှင့်ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်သည်ကို ရှည်ကြာသော ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်း အားဖြင့် သက်သေထူနိုင်ပါသည်။
ပင်လုံစာချုပ်ရေးထိုးရာတွင်မပါဝင်ခဲ့ကြသည့် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ တသုတ်ပြီးတသုတ်တောခိုခဲ့ကြသော်လည်း ထိုကနဦးကာလ ပြည် တွင်း စစ်၏ အစပိုင်း “ရောင်စုံသူပုန်ခေတ်” တွင် ပင်လုံ စာချုပ် ကို ရေးထိုးခဲ့ကြသည့် ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်း တို့သည် ပင်လုံ ပြည် ထောင် စု ကြီး ကို ယုံကြည်နေကြဆဲ၊ ပြည်ထောင်စုကြီးမပျိုကွဲအောင် ထိမ်းသိမ်းရမည်ဟုရိုးသားစွာယုံကြည်ကာ ဦးနုအစိုးရအား အကာအကွယ်ပေးခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း စစ် တွင် မပါဝင်ခဲ့ကြသေး ပေ။ တနည်းအားဖြင့် ပင်လုံစာချုပ်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အတူ ယုံယုံကြည်ကြည် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ ကြ သည့် ချင်း၊ရှမ်း၊ကချင်တို့ အနေနှင့် ပင်လုံသဘော တူညီချက်များ၊ ပင်လုံမူများရှင်သန်နေသေးသည်၊ အခြေခံဥပဒေ (၁၉၄ရ)သည်လည်း ပင်လုံ စာချုပ် နှင့် အညီရေးဆွဲထား သည် ဟု ထင်မှတ်မှား နေကြ ဆဲဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းစစ် အစပိုင်းကာလတွင် ကရင်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ကရင်နီ အစရှိသည့် အမျိုးသားရေး အခြေခံသည့် တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် လူတန်းစားကို အခြေခံ သည့် ကွန်မြူနစ်လက်ဝဲဝါဒီ များဖြစ် ကြသော အလံဖြူ၊ အလံနီ၊ ရဲဘော်ဖြူ စသည့် လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ သည် လည်း ပြည်ထောင်စု အဝှမ်း လူမျိုး ပေါင်းစုံ ပြည်သူတို့အား တစုတစည်းတည်း ဆွဲဆောင် နိုင် လောက် သည့် ဘုံနိုင်ငံ ရေး ဦးတည်ချက် များမရှိခဲ့ ကြပေ။ တပ်ပေါင်းစုများ အကြိမ်ကြိမ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသော်လည်း တာရှည် မခံခဲ့၊ အချင်းချင်း ပြန်လည် တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည် ကများသည်။ ဤ သို့ဖြင့် ရှည်ကြာသောပြည်တွင်းစစ်သမိုင်း တလျောက် ရောင်စုံ သူပုန်ခေတ် တွင်စတင်တောခိုခဲ့ကြသော အလံဖြူ၊ အလံနီ၊ ရဲဘော်ဖြူ နှင့် မဆလခေတ်တွင် တောခို ခဲ့သော ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု၏ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီပါတီတို့သည် မိမိတို့ ကြေညာ ခဲ့သော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ကိုမရောက်ပဲ တော်လှန်ရေး လမ်းခုလတ်တွင် အချိန်အခါနှင့် အခြေအနေ အမျိုးမျိုး တို့တွင် ဇတ်သိမ်းသွား ကြရ သော အထင်ကရ ပါတီအဖွဲ့ကြီးများ ဖြစ်ကြ သည်။
ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ် လွှတ်တော်တွင်းလက်တွေ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းများတွင် တပြည်ထောင်စနစ်၏ ခါးသီးမှုများ ကို လက်တွေ့ ကျကျ ခံစားလာ ရသည့် တိုင်းရင်း သားတို့သည် ပင်လုံတွင်မျှော်မှန်းခဲ့ကြသည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် များဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့် အဖြစ်ကို နိုင်ငံရေး နည်း အား ဖြင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအတွက် စတင် အရေး ဆိုခဲ့ကြသော်လည်းအရာမရောက်ခဲ့ပေ။ (Vansangva Library, www.vansangva.com တွင်ရှုရန်။)
တပြည်ထောင်စနစ် ကို ဆန့်ကျင်သည့် ရှမ်းအမျိုးသားတို့ ၏ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးစတင်ခြင်း
၁၉၅ဝခု နှစ် တွင် တရုတ်ဖြူ ကျူးကျော်မှု၏ နောက်ဆက်တွဲ အ ဖြစ်ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဗမာ့တပ်မတော်၏ ရှမ်းလူထုအပေါ် လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖေါက် မှု များကြောင့် ရှမ်းလူထုအတွင်း မကြေနပ်ချက်များ စုပြုံလာသည့်အကြား ပင်လုံ ကို အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုကို နိုင်ငံရေးနည်း အားဖြင့် ပါလီမန် အတွင်းမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရန် မျှော်လင့် ချက် ကင်းမဲ့လာသည့် အဆုံး ၁၉၅ဂ ခုနှစ် မေလ (၂၁) ရက်နေ့ တွင် ရှမ်းမျိုးချစ် ခေါင်းဆောင် Sao Noi ဦးဆောင်သည့် Num Hsük Han ခေါ် ရှမ်းလူငယ် သုံးကျိတ်တို့ မှ သေနတ် (ရ) လက်ဖြင့် ရှမ်းပြည်လွတ်မြောက်ရေး အ တွက် လက်နက်ကိုင် တော် လှန်ရေး ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေး ထိုး ခဲ့သည့် ကနဦး ပင်လုံပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ ဝင်ထဲမှ ရှမ်းအမျိုးသားတို့ က လက်နက်စွဲကိုင်ကာ ရှမ်းပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများ ဆိပ်သုဉ်းစေခဲ့သည့် တပြည်ထောင်စနစ်ကို စတင် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
တပြည်ထောင်စနစ် ကို ဆန့်ကျင်သည့် ကချင် အမျိုးသားတို့၏ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးစတင်ခြင်း
ကချင်ပြည်နယ် အနေနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် များဆုံးရှုံးမှု အပေါ် မကြေမနပ် ဖြစ်နေကြသည့်အချိန်တွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုက အများ တ ကာ ဝိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည့်ကြားက ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် တရားဝင်ပြဌာန်းခဲ့ခြင်း၊ စီမော်၊ဂေါ်လံ၊ဂန်ဖန် အစရှိသည့် ကချင် ပြည်နယ်၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ကချင်ခေါင်းဆောင်များကကန့်ကွက်သည့်ကြားမှ တရုတ်ပြည်အား လွှဲပြောင်းပေးအပ် ခဲ့ ခြင်း အစ ရှိ သည့် နိုင်ငံ ရေး အခင်း အကျင်း များ ၏နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၅) ရက်နေ့တွင် Zau Seng, Zau Tu, Zau Dan အစရှိသည့် ကချင်မျိုးချစ် ညီအစ် ကို သုံး ဦးမှ ဦး ဆောင်ကာ ကချင်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပြန်သည်။ ဤသည်မှာ ပင်လုံ စာချုပ် ကို လက်မှတ် ရေး ထိုး ခဲ့သည့် ကနဦး ပင်လုံ ပြည် ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ထဲမှ ကချင် အမျိုးသားတို့က လက်နက်စွဲကိုင်ကာ ကချင်ပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး များ ဆိပ်သုဉ်း စေခဲ့ သည့် တပြည်ထောင် စနစ်ကို စတင်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
တပြည်ထောင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သည့် ချင်း အမျိုးသားတို့၏ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးစတင်ခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယုံကြည်ကာ ကနဦးပြည်ထောင်စုတွင် ပြည်နယ်ပင်မယူပဲ ချင်းဝိသေသတိုင်းအဖြစ် ပြည်ထောင်စုတွင်ပါဝင် လာ ပြီး တပြည်ထောင်စနစ် အောက် တွင် မိမိတို့ ၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သဖြင့် ပါလီမန်ခေတ် လွှတ်တော်အတွင်းမှ ချင်း နိုင်ငံရေး သမားများက အမျိုးမျိုး အရေးဆို ခဲ့ကြ သော်လည်း အရာမ ရောက်ခဲ့ပေ။ ၁၉၆၄ ခုနှစ် တွင် ချင်းမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော Pu Hrang Nawl (ပါလီမန်ခေတ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်), Pu Thualzen (ချင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်း မှ တပ်ကြပ်ကြီးဟောင်း), Pu Son Kho Pau (ချင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းမှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း), Pu Son Cin Lian (ပါလီမန်ခေတ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်), Pu Dam Kho Hau, Pu Pa Cung Nung တို့ ကဦးဆောင်၍၄င်း ၁၉ရ၆ ခုနှစ် တွင် Pu Mang Tling (ပါလီမန်ခေတ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်), Pu William Sa Lian Zam (ရေတပ်မှ တပ်ကြပ်ကြီးဟောင်း) တို့ မှ အသီးသီး ဦးဆောင်၍၄င်း ချင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး များကို စတင် ခဲ့ကြ သော်လည်း ထိုခေတ် ထိုကာလ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေး၊ ဒေသဆိုင်ရာ ပထဝီ နိုင်ငံရေး၊ ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး အခြေအနေ များ နှင့် လက်နက် ကိုင်တော်လှန်ရေး တို့ ၏ သဘော သဘာဝ အရ အခက်အခဲ ပေါင်း မြောက်မြားစွာကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး မွေးသေ တော်လှန်ရေးများ အဖြစ် ချုပ်ငြိမ်း ခဲ့ကြရသည်။ ၁၉ဂဂ ခုနှစ် မတ်လ (၂ဝ) ရက်နေ့တွင် ချင်းမျိုးချစ် ခေါင်းဆောင် Pu Tial Khar မှဦးဆောင်ကာ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး ကိုတည်ထောင်ပြီး ချင်းအမျိုးသားတို့၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ကို ပြန်လည်စတင် နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ပင်လုံ စာချုပ် ကို လက်မှတ်ရေး ထိုး ခဲ့သည့် ကနဦး ပင်လုံ ပြည် ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ထဲမှာ ချင်းအမျိုးသားတို့က လက်နက်စွဲကိုင်ကာ ချင်းပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီ အခွင့် အရေးများ ဆိပ်သုဉ်း စေခဲ့ သည့် တပြည် ထောင် စနစ်ကို စတင်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
တပြည်ထောင်စနစ်ကိုဆန်ကျင်သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တို့၏ တပ်ပေါင်းစုများ
လူမျိုးစု တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ၏ ၁၉ရ၆ ခုနှစ် မေလ (၁ဝ) ရက်နေ့ တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ကချင်၊ ကရင်၊ကရင်နီ၊ချင်း၊ရှမ်း၊ပအို့၊လားဟူ၊မွန်၊ပလောင်၊ဝ၊ရခိုင် အစရှိသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း တို့ပါဝင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီတပ်ဦး (National Democratic Front) သည်၎င်း Kachin Independence Organization (KIO), New Mon State Party (NMSP), Shan State Army-North (SSPP /SSA), Karen National Union (KNU), Karenni National Progressive Party (KNPP), Chin National Front (CNF), Lahu Democratic Union (LDU), Arakan National Council (ANC), Pa-Oh National Liberation Organization (PNLO), Ta-ang National Liberation Army (TNLA), Wa National Organization (WNO) တို့ ပါဝင်ပြီး ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့ တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော United Nationalities Federal Council (UNFC) ခေါ် တပ်ပေါင်းစုတို့သည်၎င်း တပြည်ထောင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး ပင်လုံမူ ကို အခြေခံသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန် ဘုံနိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် တပ်ပေါင်းစုများဖြစ်သည်။
တပြည်ထောင်စနစ် ကို ဆန့်ကျင်သည့် မြို့ပြ ဗမာ ကျောင်းသား တို့၏ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးစတင်ခြင်း
ထို့အပြင် ၁၉ဂဂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) ခေါ် လက်နက်ကိုင် ကျောင်းသားတပ်မတော် သည်လည်း တပြည်ထောင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ကာ ဗမာမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ချမှတ်ခဲ့သော ပင်လုံမူ ကိုအခြေခံသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကို ဦးတည်ကာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ သည့် ပထမ ဦးဆုံး သော ဗမာလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အထက်ပါ တပ်ဦး တို့တွင်မပါဝင်သော Restoration Council of Shan State (RCSS) နှင့် United Wa State Army (UWSA) တို့သည်လည်း တပြည်ထောင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ကာ ပင်လုံကိုအခြေခံသည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ကိုထူထောင် ရန် ဦးတည်ချက်ရှိကြသည်။
တပြည်ထောင်စနစ် ကို ဆန့်ကျင်သည့် ဗမာ့ တပ်မတော်၏ သမိုင်းဝင် ခြေလှမ်းသစ်
တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ မူကြမ်းအားအချောသပ်ရေးဆွဲရေး အတွက် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ နှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် မေလ ၂၁ နှင့် ၂၂ ရက်နေ့ဆွေးနွေးပွဲ များတွင် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ရေး အတွက် အခြေခံမူများကိုညှိနှိုင်းရာတွင် အထူးသဖြင့် တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖက်မှ အထစ်အငေါ့ ဖြစ်ခဲ့သည့် “ဖက်ဒရယ်” ဟူသော ဝေါဟာရ အသုံးအနှုံးကို အစိုးရဖက်မှ သဘောတူကာ “ဒီမိုကရေစီ နှင့် အမျိုးသား တန်းတူရေး ကို အာမခံချက်ပေးသော ဖက်ဒရယ်စနစ်” ကိုကျင့်သုံးသော ပြည်ထောင်စု ကိုတည်ဆောက်ရန် ဖက် နှစ်ဖက်လုံး မှ ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့များက အခြေခံမူအဖြစ် ဘောတူညီမှုရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်း ညှိ နှိုင်းရေး အဖွဲ့များတွင် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဖက်မှ (တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင်) UPWC ခေါ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မီတီ ဝင် များ နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့များမှ NCCT ခေါ် တနိုင်ငံ လုံးအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ညှိင်းနှိုင်းရေးကော်မီတီဝင် များပါဝင်ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့် ရာစုနှစ် ထက်ဝက်ကျော် ကာလ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေဝင်း က ဖက်ဒရယ် ကိုခွဲထွက်ရေးမူအဖြစ် တတိုင်းတပြည်လုံးကို နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ လိမ်ညာမှိုင်းတိုက် နိုင်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့တပ်မတော်သည် ယင်း ဖက်ဒရယ် စနစ် ကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် မေလ (၂၁) ရက်နေ့အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် လက်ခံလာသည်မှာ ပင်လုံပြည်ထောင်စုကြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး သမိုင်းတွင် အရေးကြီး သော သမိုင်း အလှည့် အပြောင်းတခုအဖြစ် မှတ်တမ်းတင် ရမည်ဖြစ်ပေသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဗမာ့တပ်မတော်အနေနှင့် အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေဝင်း ၏ လောင်းရိပ်အောက်မှ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့သည့် ပထမ ခြေလှမ်း အဖြစ်ပြည်သူ တရပ်လုံးက ကြိုဆိုကြရပေမည်။
ပင်လုံကိုခြေခံသော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး သမိုင်းမြင်ကွင်းကျယ်။
ဤသည်မှာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် မှစကာ ပင်လုံ ပြည်ထောင်စုကြီး တစတစ ပြိုကွဲပျက်စီးခဲ့သည်မှ ယနေ့ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အထိ နှစ်ပေါင်း (ရဝ) နီးပါးကြာညောင်းခဲ့ပြီ ဖြစ်သော သမိုင်း ဖြစ်စဉ် တခုလုံးအပေါ် လွှမ်းခြုံ ပြီး မြင်ကွင်းကျယ် ရှုထောင့်တခု မှ မြင်တွေ့ ရသည့် တပြည်ထောင် စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကြသည့် အရေးကြီးသော သမိုင်း မှတ်တိုင်အချို့တို့ဖြစ်ပေသည်။ တနည်းအားဖြင့် ပင်လုံတွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် ငြိမ်းချမ်းသော သံတမန် နည်းအားဖြင့် စတင် အုပ်မြစ်ချခဲ့သည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီး သည် အမှန်တကယ် တွင်မတည်ရှိတော့ပဲ ပျောက်ကွယ်ပျက်စီး သွားခဲ့သော်လည်း နှစ်ပေါင်း ရှည်ကြာစွာ လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့၏ အသက်၊ သွေးချွေး နှင့် အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ် ချမ်းသာတို့ကို ရင်းနှီးပေးဆပ်ကာ၊ ပြန်လည်ရေး ဆွဲခဲ့ရ သည့် ပင်လုံ ပြည်ထောင်စုကြီး ၏သမိုင်းဖြစ်ပေသည်။ ပြည်သူတရပ်လုံးအနေနှင့် ပင်လုံ ပြည်ထောင်စု ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ဖြစ်စဉ် ကိုမျက်ခြေမပြတ်သင့်ပေ။ ပြည်သူတို့လိုလားတောင်းဆိုနေသည်မှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ရေးထိုးရန် သက်သက်မဟုတ်ပဲ၊ လက်တွေ့ စစ်မြေပြင် ရှေ့တန်းများတွင် ထိုးစစ်များရပ်စဲရေး၊ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ် သည့် သေနတ်သံ များရပ်စဲရေးဖြစ်သည်။ တပြည်ထောင်စနစ်ကို အားလုံးသောအင်အားစုတို့မှ ဆန့်ကျင်လာကြပြီး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပြန်လည် တည်ဆောက် ရေး ကိုလည်း အားလုံးသောအင်အားစုတို့မှ သဘောတူလက်ခံလာကြသည့် ယနေ့ အချိန်အခါတွင် အဓိပ္ပါယ်လုံးဝ ကင်းမဲ့ သည့် ပြည်တွင်းစစ်ကြီး အား လက်တွေ့ကျကျ အမှန်တကယ်ရပ်စဲရေး သည် ဗမာအပါအဝင်၊ တပ်မတော်သားများအပါအဝင် လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတရပ်လုံး ၏ စစ်မှန်သော ဆန္ဒ ဖြစ်သည်။
လူမျိုး ပေါင်းစုံပြည်သူတရပ်လုံး ၏အနာဂတ် ထာဝရငြိမ်းချမ်းစေရေးအတွက် အကောင်း ဆုံးနှင့် တခုတည်းသော အဖြေမှာ ပင်လုံဆီသို့ပြန်လည်ဦးလှည့် ရန်မှတပါး အခြားရွေးချယ် စရာ လမ်းမရှိပေ။ ပင်လုံတွင် နိုင်ငံ့ ဖခင်ကြီးများ (founding fathers များ) မျိုးစေ့ချခဲ့သည့် လမ်းစဉ်သည် လူမျိုးတမျိုးနှင့်တမျိုး ရန်လိုမုန်းထားမှုများ ကြီးထွားစေမည့် အကြမ်းဖက်နည်း၊ စစ်ရေးနည်းဖြင့် နယ်မြေများကို သိမ်းပိုက်ကာ ထူထောင်ရမည့် ပြည်ထောင်စု ၏ မျိုးစေ့ မျိုး အလျဉ်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဗမာအပါအဝင် လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့အကြား “ဆူကြုံနိမ့်မြင့်မရှိ“ တန်းတူ သော၊ လွတ်လပ်သော၊ ဒီမိုကရေစီ အပြည့် အဝရှိသော၊ အပြန်အလှန်လေးစားမှု ရှိသော၊ အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုသော ပင်လုံ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ် မျိုးစေ့ကိုသာ ချထားခဲ့ကြသည် ကို သမိုင်း အထောက်အထားများ အခိုင်အမာ ရှိနေပါသည်။
ပင်လုံ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ် အားဖြင့် သာလျင် လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့ ၏ စိတ်နှလုံး ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ခိုင်မာ တောင့်တင်း သောပြည်ထောင်စုကို လည်းပင်လုံစိတ်ဓါတ် အားဖြင့်သာ ပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။ အတိတ် ကာလ တလျောက်လုံး ဖြတ်သန်း ခဲ့ကြရသည့်ပကတိသမိုင်းအတွေ့အကြုံများ အရ အင်အား သုံးကာ နယ်မြေ စိုးမိုးရေး၊ နယ်မြေသိမ်းပိုက်ရေး စစ်ရေးလမ်းစဉ် အားဖြင့် ခိုင်မာသော ပြည်ထောင်စု ကို တည်ဆောက်၍ မရနိုင် ကြောင်း သမိုင်း သင်္ခန်းစာများကို အထင်အရှား တွေ့မြင်ခဲ့ကြ ပြီးဖြစ်သည်။ စစ်ရေးနည်းဖြင့် နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ကို အစည်းပြေစေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုကြီး၏ အရှည်သဖြင့် တည်တန့် ခိုင်မြဲရေး ကိုပါခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို လည်း အားအင်ချိနဲ့စေခဲ့ သည်ကို မျက်ဝါး ထင်ထင် တွေ့မြင်နေ ရပြီဖြစ်သည်။ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူတို့ သည်လည်း ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက် နက် စေခဲ့သည်ကို သမိုင်းလက်တွေ့တွင် တွင်ဖုံးကွယ်၍မရသောအမှန်တရား ဖြစ်ပေသည်။
လူမျိုးတမျိုးနှင့်တမျိုး စစ်အင်အားသုံးကာ နိုင်ထက် စီးနင်း ပြုကျင့် သည့် ဝါဒသည် ပင်လုံ လမ်းစဉ် နှင့် ဆန့်ကျင် သော လမ်းစဉ် သာဖြစ်ပေသည်။ ပင်လုံကိုကျောခိုင်း ခြင်းအားဖြင့် ဗမာအပါအဝင် မည်သည့် လူမျိုးကို မျှ ကောင်းကျိုး မပြုနိုင်ခဲ့ ကြောင်း၊ ဗမာ့ တပ်မတော် အပါအဝင် မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းကိုမှ အကျိုးမပြုခဲ့ကြောင်း သမိုင်း အတွေ့အကြုံများ အရ အခိုင်အမာ သက်သေထူ ခဲ့ ပြီးဖြစ်သည်။
ပင်လုံနိုင်ငံတော်ကြီးကို အင်အားစုအားလုံးတို့၏ စုစည်းမှုခွန်အားဖြင့် လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့နှင့် အတူ စည်းစည်းလုံးလုံး ပြန်လည် တည်ဆောက်ကြပါစို့။
ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းတွင် အခြားသောအရေးကြီးသည့် သမိုင်းအလှည့်အပြောင်းများကိုအောက်ပါ လင့် တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
May 29th, 2014 at 4:14 pm